By axadle Last updated Jul 11, 2020
Tababaraha Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa ka hadlay guushii ay koxodiisu ka gaadhay Alaves ee usii dhoweysay hanashada horyaalka LaLiga oo saddexda kulan ee ka hadhay ay uga baahan yihiin shan dhibcood oo kaliya.
Thibaut Courtois waxa uu magacaabay ciyaartoyga naadigiisa ka saacidaya inay horyaalka sannadkan ku guuleystaan, kaas oo mar kale la baxsaday ciyaartii ay Alaves kaga adkaadeen.
Los Blancos ayay Jimcihii ka maqnaayeen raxan ka mid ah ciyaartoyda laf-dhabarta ee difaaca sida Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo iyo Nacho, laakiin waxay awoodday inay 2-0 ku garaacaan Alaves.
Zidane oo la hadlay warbaahinta kaddib guusha Alaves, ayaa waxa uu amaan u jeediyey goolhaye Thibaut Courtois oo uu ku tilmaamay in kooxdiisa uu ka caawinayo inay horyaalka hantaan, isla markaana uu goolkiisa ka joojiyey kubbado badan oo goolal noqon lahaa.
“Waa ciyaartoy aad muhiim u ah oo saamayn weyn ku leh. Dedaal kooxood ayaanu halkan kusoo gaadhnay, laakiin Thibaut ayaa naga joojiyey goolal badan, anaguna wax wanaagsan ayaanu samaynaynaa.” Ayuu yidhi tababare Zidane.
Tababare Zidane waxa uu qiray in goolal tiro yar fasal ciyaareedkan kooxdiisa laga dhaliyey, waxaanu u mahad celiyey Courtois, waxaanu yidhi: “Inaan goolal lagaa dhalin macquul maaha, laakiin waa dhab in goolal tiro yar la naga dhaliyey. Waa inaanu sii wadno waxa aanu qabanayno, waxaananu haysanaa Courtois oo taam ah, wax badanna lanagama dhalin.”
Saddexdii kulan ee ugu dambeeyey, Real Madrid waxay heshay rikoodheyaal, balse Zidane waqti kuma bixin markii wax laga weydiiyey, isaga oo yidhi: “Haddii uu rikoodhe jiro, waa in rikoodhe la qabto. Waxay ahayd dhaqaaq wanaagsan, waxa muhiimka ahna waa inaanu goolal dhalinay.”
Shan dhibcood oo kaliya ayay Real Madrid uga baahan yihiin kulamada saddexda ah ee u hadhay si ay horyaalka ugu guuleystaan, laakiin Isniinta ayay koobka qaadi karaan haddii Barcelona laga badiyo.
Zidane oo ka hadlay guusha horyaalka, ayaa yidhi: “Waanu isku dayaynaa. Wali waxa hadhay saddex ciyaarood, mana garanayna waxa dhici doona. Hadda waa inaanu nasano sababtoo ah ma haysano waqti badan, inkasta oo ay nasashadu fiican tahay guusha (horyaalka) kaddib.”
Xaaladda laacibka reer Belgium ee James Rodriguez oo laga reebay liiska ciyaartoyda Real Madrid ee Is-aaragii Alaves iyadoo booskiisu bannaan yahay, ayaa Zidane wax la weydiiyey, haddii laacibkan ay uga dhamaatay kooxda, waxaanu si kooban u yidhi: “Ma garanayo”.